Isikhumba seLaptop Isikhumba - Isikhumba se-Pisa Pelle Italian
Isikhwama sekhompyutha siyimpilo yethu yansuku zonke, ngoba ngaphezu kwe-PC kungaqukatha amadokhumenti, idayari nezinye izinto ezidingekayo emsebenzini noma esifundweni. Kepha into ebaluleke kunazo zonke ihlala i-PC, ithuluzi elisemqoka elisivumela ukuthi sikwazi ukuxhumana nomhlaba wonke ngakho-ke kufanele lihanjiswe futhi ligcinwe esikhwameni esifanele, esilivikelayo futhi siqinisekise yonke indawo edingekayo kanye nokusebenziseka kwayo.
Izinto ezinhlanu okungafanele zibukelwe phansi
1) Okokuqala, isikhwama sakho selaptop kumele siqine futhi kumele sibekezelele isisindo.
2) Kumele ibe nokumboza okuhle ukuvikela ikhompiyutha kusuka ezinqampeni, ekuthwalweni okusheshayo, nasekuweni okungalindelekile.
3) Kuyadingeka ukuba ube namaphakethe weshaja, igundane, amakhebuli nezinye izinto.
4) Kudingeka ukuqina kwentambo yamahlombe ukuze uthwale i-pc ngaphandle komzamo omningi, ikakhulukazi uma ushesha.
I-5) Ukubukeka akuyona yonke into, kepha uma isikhwama se-laptop sinika ubuhle nobungcweti yinani elingeziwe; ngakho-ke ngobuhle kuyodingeka ukuthi uphathwe ngokuningiliziwe, ngobungako nangobuchwepheshe.
Isikhumba singcono, ngani?
Uma ucabanga ukuthi yisiphi phakathi kwe-nylon, i-PVC noma isikhwama sesikhumba esingcono, impendulo isobala: isikhumba asinikezi ukubukeka okucwengile nenhle kuphela, kepha siqinisekisa amandla nokuqina, ngakho-ke ukuvikelwa okuthe xaxa esifundweni sakho noma Ithuluzi lomsebenzi.
Ungakhetha isikhumba esishelelayo noma imodeli enomphumela “osekhulile”, umvini omncane, kodwa ohehayo kakhulu. Isikhumba sizovikela i-cask yakho kunoma yimiphi imithelela futhi sizokusiza sithakazelise futhi sibe nobungcweti!